Nguva dzose Don Juan Tenorio, yakakosha echinyakare emisi iyi | Zvazvino Zvinyorwa
Chikwangwani che Don Juan Tenorio (1922) naRicardo de Baños.
Rimwezve gore Ini handipe kotara kumanhanga ekunze. Kwete zvese izvo zvigadzirwa zvemabhata, cobwebs nedzimba dzinoshamisira dzinopinda muzvitoro nemabhawa. Kana kumapato echikoro ewadhi diki zvipfeko uye zvipoko (vamwe vanobva varota ...). Ini handisi kuenda nenguva kana kunyatsoita zvematongerwo enyika nekuti ndakagara naye, naDon Juan Tenorio. Nenhema yazvino yakatukwa (kana kushandurwazve) yenhema inonyadzisa uye yakashata, asiwo yevakanyanya murudo uye vakaregererwa.
Don Jose Zorrilla akanyora nyaya yake mu 1844, izvo zvakakurudzira iwe Anonyengera weSeville kubva 1630, yakanzi Tirso de Molina. Uye ndizvo zvaunofanirwa kuverenga uye kunyanya kuona zvichimiririrwa mumazuva aya ari kuuya. Ini ndoziva kurwa kwangu kurasika kurwa, asi Ini ndichaedza kurwira gore rega rega kuti ndirambe ndichiipa mukurumbira. Kare kare vana vechikoro vaifanira kuidzidza uye kuidzokorora. Ikozvino… ikozvino. Zvakanaka, ndinodzoka kumagumo ese aGumiguru kuimba yeLaurel kuti ndimuwane achinyora tsamba yake. Izvi ndizvo mamwe mavhesi ake asingakanganwiki.
2 NaDON LUIS
3 NaDON DIEGO
4 NaDoÑA INÉS
Kuchema kwakadii uko!
Asi mheni yakaipa inondipwanya
hongu mukupedzisa tsamba
havabhadhare mari yekuchema kwavo!
Heino don Juan Tenorio
uye hakuna murume kwaari.
Kubva kumuchinda anozvikudza
kune uyo anobata hove muchikepe chakareruka,
hapana munhukadzi wandisinganyore,
uye chero kambani inovhara
kana iri yegoridhe kana ine kukosha.
Mutsvage iye vapanduki;
Anozvirumbidza pamusoro pokumubvisa,
Ngatione kana paine mumwe munhu anomupfuura
mumutambo, mukurwa kana murudo.
Ndakakwira kumizinda yamambo,
uye kwese kwandasiya
ndangariro dzinovava kwandiri.
Ndakachema kudenga, asi iye haana kundinzwa.
Asi kana masuo aro akandikomberedza,
nhanho dzangu pasi
pindura denga, kwete ini.
Ibva, ibwe rekunyepedzera!
Regedza, rega ruoko irworwo
kuti kuchine zviyo zvekupedzisira
paawa yehupenyu hwangu.
Chirega, kana chiri chokwadi
kupfuura poindi yekuzvidemba
ipai mweya ruponeso
Ini, Mwari mutsvene, ndinotenda mamuri;
kana chiri changu chisati chanzwika nechakaipa,
Tsitsi dzenyu hadziperi ...
Ishe ndinzwirei ngoni!
Na Mwari uri murume anoshamisa!
Unoshandisa mazuva mangani
mumukadzi wese waunoda?
Ibva pamazuva egore
pakati pawo paunowana ipapo.
Imwe yekuvaita kuti vadanane,
uye awa yekuvakanganwa.
Unondiuraya ... More ndinokuregerera
yaMwari mukutonga kutsvene.
Nguva yakareba iwe wakandiisa.
(Kunyangwe ini ndichagara ndichida vhezheni yaTirso de Molina uko Trickster yakati "Unondivimba kusvika rinhi!").
Ah! Ichokwadi here, ngirozi yerudo,
iyo pamhenderekedzo iri yoga
mwedzi wakachena unopenya
uye unofema zvirinani?
Iyi aura inodzungaira, inozadza
Mhenderekedzo inofadza inomera:
iyo mvura yakachena uye yakadzikama
iyo inopfuura isingatyi
igwa remubati wehove
uyo anomirira kuimba zuva,
Ichokwadi here, njiva yangu,
urikufema chii love
Handizive ... Kubva pandakamuona,
Bridget wangu, uye zita rake
wakandiudza kuti ndine murume iyeye
nguva dzose pamberi pangu.
nendangariro dzako dzinofadza,
uye kana ndikamurasa kwechinguva,
mundangariro dzake ndinodzokazve.
Handizive kufadza kupi
mundangariro dzangu inoshandisa,
izvo zvinogara zvichindimonyorora ndakananga kwaari
uye pano uye mune zvinyorwa
uye kwese kwandinoyambira
kufunga ikoko kunakidza […].
Nyarara, nekuda kwaMwari, o, don Juan!
izvo zvandisingazokwanise kuramba
nguva refu pasina kufa
saka handina kumbonzwa kuda.
Ah! Nyarara nekuda kwetsitsi,
kuti kuteerera kwauri kunoratidzika kwandiri
kuti huropi hwangu hunopenga
moyo wangu unopisa.
Ah! Makandipa kuti ndinwe
firita yehero, hapana mubvunzo,
izvo zvinokubatsira iwe kuzvipira
hunhu hwevakadzi […].
Mweya wangu! Iro shoko
hupenyu hwangu hunoshandura nzira,
kusvikira Edheni yazarukira kwandiri.
Haisi, Dona Ines, Satani
uyo anoisa rudo urwu mandiri;
nditundire iye zvimwe.
Kwete, rudo runokosheswa nhasi
mumoyo mangu unofa
harisi rudo rwepanyika
senge yandakanzwa kusvika zvino;
kwete iyo pfupi inopera
kuti chero gasi rinodzima;
Ndiwo moto unomedzwa
zvikuru sei iye anoona, zvikuru, voracious.
Saka rasa kushushikana kwako
akanaka doña Inés,
nekuti ndinonzwa ndiri patsoka dzako
achiri kugona kunaka.
Hongu, ndichaenda kuzvikudza kwangu kunonamata
pamberi paMutungamiriri akanaka,
kana kuti achandipa rudo rwako,
kana kuti achatozondiuraya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Theater » Nguva dzose Don Juan Tenorio, yakakosha klassiki yemisi iyi
Maria Ines akadaro
Zvaifadza kuiverenga… maita basa!
Pindura María Inés
Iwo gumi akanakisa mabhuku ekuverenga paHalloween uye utye